China 100% Cotton Short uwe nwoke T-uwe elu PY-ND004 Nlụpụta na Factory | Pinyan
Printing Sexy Sports Short uwe Women T-uwe elu PY-D ...
Mgbatị Egwuregwu Long Sleeve Women T-Shirt PY-CT002
Omenala Logo Long Sleeve Women'S Hoodie PY-WW003
100% Cotton Short Sleeve Men T-uwe elu PY-ND004
Omenala logo ụkpụrụ blank gburugburu olu T-uwe elu
Nkọwa ngwaahịa: T-shirt akwa ihe ọmụma, olee ihe ị maara?
1. Gini bu gram?
A na-ejikarị gram gram egosi ọkpụrụkpụ nke akwa ahụ. Karịa arọ ahụ, uwe ahụ na-ebuwanye ibu. Ibu uwe elu T-uwe elu dị n’etiti 160g na 220g. Yọ bụru oke ẹhu-eghughu; Ọ bụrụ na ọ bụ oke oke, ọ ga-abụ sultry. Ohaneze, ọ ka mma ịhọrọ n'etiti 180-260g. (obere aka uwe na-adịkarị 180-220g, nke bụ naanị oke nkedo iji eyi. T-shirts ogologo na-ahọrọ akwa 260g, nke bụ nke ụdị thickened)
2. Gịnị bụ nọmba alaka ụlọ ọrụ?
Nkọwa: ogologo ogologo nke owu yarn na-adịkarị otu paụnd.
Nnukwu ọnụ Yarn: ezigbo yarn yarn na 18 ma ọ bụ obere ọnụ, a na-ejikarị maka ịcha akwa ma na-ebu akwa ma ọ bụ na-ebuli ma na-ede akwa ákwà.
Yardị yarn dị n'etiti: 19-29 gụọ yarn owu. A na-ejikarị ya eme ihe maka uwe a kpara nke ọma yana ihe izugbe niile.
Ezi ogho: 30-60 gho ogho owu. A na-ejikarị ya akwa akwa akwa. Ihe dị elu karịa ọnụ ọgụgụ ahụ, ọ dị nro karịa ya. T-uwe elu na-abụkarị 21 na 32.
3. Gịnị bụ combing?
E nwere ike kewaa yar yar na-acha uhie uhie, jirikwa ya kee ya.
Ejiri yarn: na-ezo aka na yarn nke usoro ịmegharị agba agba, nke a makwaara dị ka yarn.
Ejiri yarn: na-ezo aka na yarn nke na-agbakwunye site na ịgbakwunye usoro mkpokọta na yarn a na-ejikọta ọnụ mgbe ị na-eji eriri na-eme akwa dị elu dị ka ihe akụrụngwa. Elu nke akwa ahụ dị ọcha ma dị nro.
4. Kedu usoro usoro mbipụta T-shirt?
T-uwe elu na-ebi akwụkwọ na-ihu ọma kewara n'ime ihuenyo obibi na nyefe akwụkwọ.
Screen ebi akwụkwọ: technology bụ dịtụ mgbagwoju, tumadi gụnyere imewe, film, ebipụta, ihicha ọtụtụ nzọụkwụ. Uru nke mbipụta ihuenyo bụ oke ngwa ngwa, ogologo oge na enweghị ike ijikọ. N'ihi na nnukwu efere na-eme ka ọnụahịa nke akwụkwọ ngebichi, achọrọ mmepụta ihe iji belata ọnụahịa, nke na-enweghị ike izute ihe achọrọ nke otu mbipụta ma ọ bụ obere ogbe.
Nyefee mbipụta: a makwaara dị ka stampụ ọkụ. Ihe ndị bara uru bụ agba na-enwu gbaa na teknụzụ dị mfe. Ihe ọghọm bụ na ogologo oge anaghị adịte aka ma na-asacha.
5. Kedụ ka e si agụ T-shirt?
Ihe e ji mara ọgwụgwọ abụ bụ iwepu fuzz nke e guzobere n'elu yarn n'ihi eriri na-enweghị winding na eriri na-apụ apụ, nke mere na akwa ahụ dị mma ma mara mma, na agba akwa ahụ dịkwa, ma nwee ike ibipụta usoro doro anya na nke ọma.
6. Kedu uru nke akwa akwa T-shirt? Kedu ihe kpatara ịgbakwunye spandex
A na-eji akwa owu dị ọcha mara mma dị mma, nchekwa dị mma na gburugburu ebe obibi, mana ọ dị mfe ịhịkota. Gbakwunye obere spandex nwere ike melite njirimara anụ ahụ nke akwa ahụ, na-eme ka ngwa ngwa ahụ dịkwuo elu, ma na-echekwa udidi na nkasi obi nke owu dị ọcha. Tụkwasị na nke ahụ, ịgbakwunye spandex na olu olu nwere ike igbochi neckline ịtọpụ na nrụrụ, ma jigide mgbanwe na-adịgide adịgide nke olu olu.
Blank gburugburu n'olu obere uwe T-shirt, ọmarịcha owu, adụ, dị ọcha na eke, ọ dịghị emerụ bekee, mma ma na ala. Omuma ndi otu ndi otu, ndi di nma na ndi di nro. Uwe ejiji dị mfe, ọmarịcha ọrụ, nnwere onwe. Teknụzụ ụgbọ, njupụta na-akawanye mma, dabara adaba. Usoro dị iche iche eji ebi akwụkwọ, uwe eji eme ọfụma mara mma, akwa ndị ọzọ, akwa klaasị, akwa ọrụ, akwa otu, akwa ndị nne na nna, wdg.
Product ojiji: maka mgbasa ozi, Hoodie, otu uwe, onye customization, wdg, nwere ike hazie agba, ụkpụrụ, logo.
Teknụzụ: tedzọ Mbipụta Akwụkwọ: Digital obibi
Ebe mbido: Jiangxi, China Aha Aha: PIN YANG YU
Nọmba nlereanya: PY-WW003 Njirimara: Mgbochi ndozi, iku ume, Plus Size, Sustainable
Olu akwa: O-Olu Fabric Arọ: 180 Grams
Onu ogugu di: 4480 Ihe: 100% owu
Uwe aka uwe: Short sleeve Design: Blank, Custom Welitere
Typedị :kpụrụ: Bipute Style: Smart Casual
Ricdị ricdị: Nke kacha njọ 7 ụbọchị nlele iji buru oge: Nkwado
Size: Akara Ahaziri Ahaziri: Nabata Akara Ahaziri
Aka uwe: Short Leeve mbukota: 1pc / Opp Bag
Product aha: men't Chiefs Oge: Summer eyi
Uwe: 100% owu
A1: Anyị bụ ndị nrụpụta dị na mpaghara JiangXi, ma anyị nwere ụlọ ọrụ 500㎡ na Guangzhou, China.
Q2: Anyị enweghị usoro tshirts ugbu a, anyị enwere ike ịme tshirts ahụ?
A2: Ee ee, biko gwa anyị echiche gị gbasara tshirts, onye nrụpụta anyị ga - enyere gị aka ịmechaa nhazi ahụ.
Q3: Gịnị bụ nnyefe gị oge?
A3: Ihe nlele n'ozuzu 3-7days mgbe ugwo ， Maka ahaziri ahaziri, Ọ dabere na ngwaahịa & oke.
Q4: Enwere m ike mix dị iche iche aghụghọ?
A4: O doro anya!
Q5: Gini bu ihe nlere?
A5: Maka ahaziri iche, anyị ga-ana sample ego ma ga nkwụghachi ya mgbe nnukwu ịtụ ihe karịrị 100 tent
Q6: Enwere m ike ịnweta ọnụ ala ma ọ bụrụ na m nye iwu nnukwu ọnụọgụ?
A6: Ee, ọnụahịa dị ọnụ ala karịa karịa nnukwu iwu.
Q7: Olee otú ị pụrụ ekwe nkwa na mmepụta àgwà?
A7: Anyị enyochara tupu anyị ezipụ, ga-emepụta ọzọ n'efu ma ọ bụrụ na ọ bụ nsogbu dị mma site n'akụkụ anyị
Q8: Enwere m ike ị nweta ihe niile ahaziri ebe a?
A8: Kpamkpam ee; naanị jiri obiọma nye anyị ndụmọdụ gị pụrụ iche, anyị ga-arụ ọrụ ahụ.
Nke gara aga: Gburugburu Olu Bipute Ogologo Uwe nwoke T-Shirt PY-NC003
Osote: Oge na-adịghị anya-olu Short uwe nwoke T-uwe elu PY-ND005
Customizable agba Cotton Cargo Men Jacket PY -...
Cotton na linen ochie V-olu Long uwe nwoke T ...
Omenala Akara Ogologo Ogologo Ulo nwoke nwoke T-Shirt PY-NC002
Ejiji Ejiji Zip Hoodies Men Jacket PY-MJ005
Ndị Hip-Hop Graphic Short Sleeve Men T-Shirt PY-ND002
Cotton Zipper Summer Men Sports Ogologo ọkpa PY-NK002